ဘုရားသခငျ၏မိခင် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / Church ကို / မာရိသညျ / ဘုရားသခငျ၏မိခင်
မာရိသညျအဘို့ဤခေါင်းစဉ်ကိုယရှေုသညျမှန်သောဘုရားသခင်စစ်မှန်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းကြောင့်,!ခေါင်းစဉ်များအသုံးပြုခြင်းကျော်ကနဦးအငြင်းပွားမှု, တကယ်တော့, နောက်ကျောအစောပိုင်းပဉ္စမရာစုနှစ်ကသွား, ခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားအကြောင်းမေးခွန်းအပေါ်ဗဟိုပြု: ကလေးသညျဘုရားသခငျသညျအမှနျတကယျမာရိအားမွေးဖွားခဲ့သည်, သို့မဟုတ်ဘုရားသခင့ရုံကိုပြု “ကျိန်းဝပ်” လူသားတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ? အဆိုပါအငြင်းပွားဖွယ်ရာ Nestorius အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်, Constantinople ၏ဘိရှော့, အဘယ်သူသည်, မာရိသညျဘုရားသခငျ၏ခေါင်းစဉ်ကိုမေမေငြင်းဆန် (ဂရိ Theotokos), ရိုးရှင်းစွာအစားခရစ်တော်၏မိခင်သူမ၏ဖုန်းခေါ်ပိုမိုနှစ်သက် (Christotokos), သူသည်ဗက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားကလေးကိုမှန်ကန်စွာဘုရား ဟူ. ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုမနိုင်အခိုင်အမာသောကြောင့်,.
ဧဖက်ကောင်စီမှာဘိရှော့, ၌ဤအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခေါ် 431, Nestorius ရှုတ်ချ’ ဆုံးမဩဝါဒပေးချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကြေညာ, ခရစ်ယာန်တွေကိုအမြဲယုံကြည်သောအဖြစ်, ယရှေုသညျအမှန်ပင်နှစ်ဦးစလုံးသညျအမှနျတကယျဘုရားသခငျ့နှင့်အမှန်တကယ်လူ့ခဲ့သည်. အဆိုပါကောင်စီ, ထိုမှတပါး, တရားဝင်သညျဘုရားသခငျ၏မာရိရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမေမေဒဏ်ခတ်အရေးယူ, ဒီခေါင်းစဉ်ကိုယေရှုအကြောင်းယုံကြည်သည်အဘယျအရစျယာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကြ. သူအမှန်တကယ်လူ့ခဲ့မိခင်တစ်ဦးသက်သေပြခဲ့ကွောငျး. မာရိရဲ့ကလေးသူဟာအမှန်တကယ်ဘုရားသခငျ့ခဲ့သညျဘုရားသခငျသက်သေပြခဲ့. ယုတ္တိနည်း, တစျသညျယရှေုသညျဘုရားသခငျဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကပြောနိုင်ပါတယ်; နဲ့ Mary ကသူ့မေမေသည်; မာရိသညျ, ထိုကွောငျ့, ဘုရားသခင်၏မိခင်ဖြစ်ပါသည်.
ဒီအငြင်းပွားဖွယ်ရာဆယ်ခုနစ်ရာစုအတွင်းပရိုတက်စတပုန်ကန်နေစဉ်အတွင်းဆက်လက်ပေါ်ထွက်လျှက်ခဲ့သည်, ယနေ့ဆက်လက်. ဒါဟာနှောက်ယှက်သည်, အငယ်ဆုံးဆို, အပြည့်အဝထောင်စုနှစ်-and တစ်နှစ်ခွဲက Nestorianism ၏ရှုံးနိမ့်သညျဘုရားသခငျ၏ခေါင်းစဉ်ကိုမေမေကခရစ်ယာန်တွေအကြားအငြင်းပွားဖွယ်ရာတစ်အရင်းအမြစ်နေဆဲကတည်းက. ပရိုကက်သလစ်မာရိကပဌနာသညျဘုရားသခငျ၏မိခင်စကားကိုနားထောငျတဲ့အခါမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့သူမ၏လွန်းလှသောတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှရသည်ဟုကြသည်ယူဆ, တစ်နည်းနည်းနဲ့ဘုရားသခင်အားအထက်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်သူမ၏မြှ. ကျွန်တော်တို့သူမသညျဘုရားသခငျအထက်ခဲ့ယုံကြည်သောကြောင့်, ကက်သလစ်ဘုရားသခငျ၏မိခင်မာရိကမခေါ်ပါဘူး, သို့သော်, ဒါပေမဲ့, အလွန်ရိုးရှင်းစွာ, ကျွန်တော်တို့သူမရဲ့ဝမ်း၌ဘွားမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားသခငျခဲ့ယုံကြည်သောကြောင့်,. တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်, ကက်သလစ်ပရိုအားဖြင့်ပငျပနျးကွ’ အမေမေဘုရားသခငျသညျမာရိဖုန်းခေါ်ငြင်းဆန်, သူမ၏သားတျော၏ဘုရားကွှေးကျွောခွငျးအပေါငျးတို့သနေစဉ်.
မာရိသညျယရှေုကိုသာအမိဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာရန်’ လူ့သဘောသဘာဝယူဖောက်ပြန်သည်. အကြောင်းမူကား,, ကက်သလစ် apologists မှန်ကန်စွာထောက်ပြသကဲ့သို့, မာရိကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှမွေးဖွား, မသဘာဝ (cf. ကားလ် Keating, ကက်သလစ်ဘာသာနှင့်အခြေခံ, Ignatius Press မှ, 1988, p. 277). မာရိ၏ဘုရားသခငျ့သားဖွားသောကြောင့်, သူမ၏အကြောင်းကိုအပေါင်းတို့နှင့်အတူဘုရားကျောင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးယုံကြည်မှုများ, နောက်ဆုံးမှာယေရှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်, သူမ၏အကြောင်းအမှန်တရားငြင်းပယ်လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုကိုယ်တော်အချို့ကိုငြင်းပယ်ဖို့ဦးဆောင်.
မာရိရဲ့ဘုရားသခငျ့သားဖွားငွငျးပယျအတွက်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ dual-သဘောသဘာဝအကြားတစ်ဦးခြားနား၏အလွန်အကျွံဆွဲယူဖြစ်ပါတယ်, ထိထိရောက်ရောက်နှစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်များသို့ကိုယ်တော်ကိုပိုင်းခြားခွဲခြမ်း: ဘုရားသခင့သခင်ယေရှုနှင့်လူ့သညျယရှေု. ပိုများသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း, ဒီ Nestorius ကို ပြု. အဘယ်သို့သောအ, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသူအခက်အခဲမွေးကင်းစသညျယရှေုသညျဘုရားသခငျတောင်းဆိုရှိသည်မယ်လို့တစ်ခါကအပေါ်ဝန်ခံ. နောက်ဆုံးမှာ, Nestorianism ရွေးအတွက်ယုံကြည်ချက်ခြိမ်းခြောက်. ထိုကဲ့သို့သောဂုဏ်ထူးခရစ်တော်ရဲ့ဘုရားနှင့်လူသားအကြားရေးဆွဲနိုင်လျှင်, ထို့နောက်သူကပြောပါတယ်နိုင်–ပင်ဟုဆိုရပါမည်–ဘုရားသခင့တကယ်တော့ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံရမည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်း. မာရိအားမွေးဖွားစသူငယ်အမှန်တကယ်ဘုရားသခငျသညျမကြီးဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှရိုက်နှင့်သေခြင်းမှထမြောက်သောသူသည်လည်းကောင်းဖြစ်ရပြီနိုင်ဘူး!
ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်၏ခေါင်းစဉ်ကိုမိခင်ကိုရှာဖွေလုပ်ပါ? အဘယ်သူမျှမ, ဒါပေမယ့်လည်းမကျွန်တော်တို့ရှာရမလဲ “သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ” မဟုတ်သလို “သမ်မာကမျြး,” ကကိစ္စများအတွက်, ဖြစ်စေ. တိကျတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုယ်တိုင်ကကျမ်းစာထဲမှာပေါ်လာပါဘူးနေစဉ်, သော်လည်း, ထိုသို့ သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော, ကမျြးစာသင်ပေးရာနှငျ့သဘောတူအဓိပ္ပာယ်. ပရောဖက်ဟေရှာယကိုးကား, ဥပမာအားဖြင့်, မဿဲရေးသားခဲ့သည်, “'' ကြှနျုပျသညျ, တစ်ကညာတစ်သားပဋိသန္ဓေ ယူ. နှင့်ဆောင်ရမည်, သူ၏နာမ Emmanuel ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလတံ့’ (အရာနည်းလမ်းများ, ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသညျဘုရားသခငျ)” (Matt. 1:23). ကျနော်တို့မာရိရဲ့ဘုရားသခငျ့သားဖွားမြင်, ထို့အပြင်, ခရစ်ဝင်ကျမ်း၌မိမိ၏ဧလိရှဗက်ရဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်အတွက်ဆိုလို: “အဘယ်ကြောင့်ဤအမှုသည်ငါ့ခွင့်ပြုခဲ့သည်, ငါ၏သခင်၏မယ်တော်ငါ့ထံသို့မလာသင့်ကြောင်း?” (လုကာ 1:43).
အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်၏ခေါင်းစဉ်ကိုမေမေဧဖက်ကောင်စီခေတ်ရှေ့တော်၌ကောင်းစွာရက်စွဲပါသမိုင်းဆိုင်ရာဘုရားကျောင်းစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်နှင့်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်လုံလောက်, တမန်တော်ယောဟန်ကမှဆငျးသခရစ်ယာန်တွေကိုဆရာ, ဆရာမများ၏ရေးသားချက်အတွက်, ယရှေုသညျထိုသူတသူ့ရဲ့သေမင်း၏ထိုအချိန်ကမာရိကအပ်နှင်းခဲ့ (cf. ယောဟန်သည် 19:27). အန္တိအုတ်မြို့သို့၏ Ignatius, အဘယ်သူသည်ယောဟန်ကိုမှတိုက်ရိုက်သင်ယူ, ယခုနှစ်အကြောင်းရေးသားခဲ့သည် 107, “ငါတို့ဘုရားသခင်အဘို့, ယရှေုခရ, မာရိသဖွငျ့ပဋိသန္ဓေယူခဲ့ပါတယ်” (ဧဖက်မှပေးစာ 18:2). Irenaeus, အဘယ်သူ၏ဆရာ Polycarp Smyrna ၏အစသာသနာပွုဆရာတစ်ဦးတပည့်ခဲ့, ဒုတိယရာစု၏အဆုံးစွန်သောတစ်ဝက်တွင်ရေးသားခဲ့သည်, “အပျိုကညာမာရိသညျ, ... သူ့စကားလုံးမှနာခံမှုဖြစ်ခြင်း, ကောငျးကငျတမနျကနေသူမသညျဘုရားသခငျကိုခံရလိမ့်မည်ဟုသောဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံရရှိ” (ယူဖောက်ပြန်ဆန့်ကျင် 5:19:1). Irenaeus '' ကျောင်းသား, Hippolytus (ဃ. 235), အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတကတော်ရည်ညွှန်း “ထိုအစက်မရှိသောနှငျ့ဘုရားသခငျ-bearing မာရိက” (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏အဆုံးအပေါ်ဟောပြောချက်).
ပတ်ပတ်လည်ကနေ 250, ကျနော်တို့ဆုတောင်းပဌနာ Sub Tuum Praesidium များ, သောအော်ဟစ်, “ကရုဏာတျောအောကျတှငျအကြှနျုပျတို့ခိုလှုံ, အိုဘုရားသခင်၏အမေ။” အလက်ဇန်းဒါး, လက်ဇန္ဒြီးယား၏ဘိရှော့, ကပြောပါတယ် 324 ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်၏ခန္ဓာကိုယ်ခဲ့သည် “ဘုရားသခင်၏မိခင်မာရိကမှဆင်းသက်လာ” (နောက်ထပ်ဘိရှော့အလက်ဇန်းဒါးနှင့်အားလုံးက Non-အီဂျစ် Bishop ကို Encyclical ပေးစာ 12). ပတ်ပတ်လည် 350, ယေရုရှလင်မြို့စိရယျလျကြေညာ, “ဘုရားသခင်၏အပျိုစင်မိခင်သက်သေခံ [ခရစ်တော်အား]” (Catechetical သင်ကြားနည်း 10:19). ရောမဧကရာဇ်ဂျူလီယန်အယူဖောက်ပြန် (နန်းစံ. 361-363) ကခရစျယာညည်းညူ “မာရိက '' Theotokos '' တောင်းဆိုရပ်တန့်ဘယ်တော့မှ [သို့မဟုတ်ဘုရားကိုဆောင်လုလင်]” (လက်ဇန္ဒြီးယား၏စိရယျလျသဖြင့်ကိုးကား, ထိုမတရားသောသူတို့အတွက်ဧကရာဇ်ဂျူလီယန်၏စာအုပ်များဆန့်ကျင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ကာကွယ်ရေးဌာန). ပတ်ပတ်လည် 365, Athanasius မာရိသညျဟုချေါ “ဘုရားသခင်၏မိခင်” (ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၏လူ့ဇာတိ 8). ဧဖရိမ်သည်ဆီးရီးယား (ဃ. 373) အဖြစ်ကောင်းစွာပြု (cf, ချီးမွမ်း၏သီချင်းများ 1:20). တွင် 382, Nazianzus ၏ဂရက်ဂိုရီအတော်လေးကိစ္စ-of-factly ကပြောပါတယ်, “မည်သူမဆိုသည်သန့်ရှင်းသောမာရိသညျဘုရားသခငျ၏မိခင်ကြောင်းသဘောတူမပါဘူးဆိုရင်, သူပုဂ်ဂိုလျအနနေဲ့နှင့်အတူလေးသာမှုမှာဖြစ်ပါတယ်” (ယဇ်ပုရောဟိတ် Cledonius မှပေးစာ, Apollinaris ဆန့်ကျင် 101).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှင့်ရီစရာ, ပင်မာတင်လူသာ (ဃ. 1546), ပရို၏ဖခင်, မာရိရဲ့ဘုရားသခငျ့သားဖွားကာကွယ်. မိမိအခုနှစ် အ Magnificat အပေါ်မှတ်ချက်ပြု, ဥပမာအားဖြင့်, သူရေးသားခဲ့သည်, “အမျိုးသားများတစ်ခုတည်းထားသောစာပိုဒ်တိုများသို့အားလုံးသူမ၏ဘုန်းအသရေသရဖူဆောင်းပြီ: ဘုရားသခင်၏မိခင်. အဘယ်သူမျှမကသူ့၏ကြီးမြတ်ဘာမှမပြောနိုင်, သစ်ပင်များကိုအပေါ်အရွက်ရှိပါတယ်အဖြစ်သူအဖြစ်အများအပြားလျှာကိုရှိခဲ့တယ်သော်လည်း။”